उसले मलाई महिनावारीको समयमा पनि छाडेन • Pokhara News by Ganthan
प्रकाशित ९ भाद्र २०६९, शनिबार १५:१९
-चरिना काब्रीडो, फिलिपिनो युवती
संसारमा सायदै कुनै देश होला जहाँ फिलिपेनो युवतीहरू नहुन्। सुन्दर अनुहार, मीठो बोली अनि अंग्रेजी भाषामा दख्खल, इमानदारीपूर्वक सेवा, आम फिलिपिनो युवतीका विशेषता हुन्। घरेलु कामदारदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ठूलठूला कम्पनी र राष्ट्रसंघीय निकायहरूमा फिलिपिनो युवतीहरू भेटिन्छन्। विश्वका कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ड्युटी फ् री पसलहरूमा पनि ग्राहकको सेवामा फिलिपिनो युवतीहरूनै खटिएका हुन्छन्। धेरै फिलिपिनोले अन्तरदेशीय विवाह गरेको पनि पाइन्छ। मायाँमा समर्पण फिलिपिनो महिलाहरूको अर्को विशेषता हो। तर यही समर्पण अभिशाप बनेपछि एउटी फिलिपिनो युवती अहिले नेपालका अदालत, प्रहरी, महिला आयोग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयको लैंगिक सशक्तिकरण समन्वय इकाइसम्म न्यायको भीख माग्दै भौताइरिइ रहेकी छिन्। उनी हुन्, ३२ वर्षीया चरिना कावि्रडो। आफू बीबीसी नेपाली सेवामा कार्यरत पत्रकार सुरेन्द्र फुयालबाट यौन शोषणमा परेको र उनले श्रीमती स्वीकार नगरेपछि अलपत्र परेको बताउने यी चरिनाको कथा निकै लामो छ। उनका अनुसार, सुरेन्द्र र उनी श्रीमान–श्रीमतीका रुपमा लिभिङ टुगेदर थिए।
गर्भवती भएपछि सुरेन्द्रले आफूलाई मानसिक र शारीरिक यातना दिएर श्रीमानको भूमिकाबाट भाग्न खोजेको बताउने चरिनालाई त्यतिबेलासम्म सुरेन्द्र विवाहित हुन् भन्ने थाहा थिएन। चरिना सुरेन्द्रको श्रीमतीको नाता कायम गराउन अहिले कानुनी लडाइमा छिन्। हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चरिनाले अंश सहितको सम्बन्ध बिच्छेद र घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेकी छिन्, जुन बिचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। चरिनाले पछिल्लो पटक साइबर अपराधको मुद्दा पनि दायर गरेकी छिन्। आफू न्याय पाएरमात्र नेपाल छाड्ने पक्षमा रहेकी चरिनासंग गरिएको कुराकानीका सम्पादित अंश यसपाली प्रस्तुत गरिएको छ।–सं.)
– त्यस्तै भन्नुपर्‍यो। हामी धेरै ठाउँमा साइक्लिङ गयौं, उसले नै मलाई यस’boutमा जानकारी गराएर सहभागी बन्न प्रेरित गर्थ्यो। काठमाडौं नजिकका धेरै गाउँ र डाँडाहरू हामीले घुमेर भ्यायौं। करीव तीन महिनाकेा यो क्रमपछि उसले मलाई प्रेम प्रस्ताव राख्यो। म पनि विस्तारै उसंग नजिक भइसकेकी थिएँ। मैले उसलाई उसको बैबाहिक स्थिति’bout सोद्धा स्पष्ट जवाफ दिन चाहेन। पछि उसले आफू विवाहित भएको तर श्रीमतीसंग डिभोर्स गरेर बसेका जवाफ दियो। उसले मसंगै बस्ने प्रस्ताव राख्यो। तर म यहाँ नेपाली परिवारसंग बसिरहेकी थिएँ। घरबेटी फिलिपिनो महिला जो नेपालीसंग विहे गरेकी। मैले घरबेटीसंग अनुमति लिएपछि सुरेन्द्र र म श्रीमान श्रीमतीको हैसियतले एकै कोठामा बस्न थाल्यौं।
– तपाइ विश्वास गर्नुस्, म सुरेन्द्र फुयालसंग सम्बन्ध राख्नु अघिसम्म भर्जिन थिएँ। फिलिपिनो केटीहरूको ’boutमा जो तपाई कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो पटक्कै होइन। क्याथोलिकहरू कुमारित्वका विषयमा निकै कठोर छन्। मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म पढाइमै व्यस्त भएँ, मैले व्वाइफ्रेण्ड बनाउने समयनै पाइँन। पछि काममा व्यस्त भएँ। एकैचोटी नेपाली युवक सुरेन्द्र मेरो जीवनमा आयो। उसले आफू नेपालको चर्चित पत्रकार भएको र सबैले चिन्ने भएकाले धोखा दिन नसक्ने कुरा बतायो। म पनि उसंग प्रभावित भएँ र हामीबीच सबै खाले सम्बन्ध कायम भयो।
पुर्व मित्र रहेकी ती फिलिपिनी युवतीले राखेको विवाहको प्रस्ताव मैंले स्वीकार्न असमर्थ भएपछि, विगत केहि महिनादेखि उनले इन्टरनेटमा विभिन्न अवतार धारण गर्दै र नेपाली पत्रपत्रिकामार्फत मेरो व्यक्तीगत चरित्रहत्या गर्ने र मलाई “नष्ट गर्ने” अभियान जारी राखेकी छन्। इन्टरनेट र विभिन्न माध्यम मार्फत जारी उनका आपत्तिजनक कार्यहरु’bout मैले नेपाल प्रहरीमा पटक, पटक उजुरी र सम्मानित अदालतमा मुद्दाहरु दायर गरिसकेको छु। अहिले जारी भ्रामक प्रचारबाजीबाट नेपालीहरुमाझ पर्न गएको चोटप्रति म क्षमाप्रार्थी छु।
२०६९ भदौ ५ गते मेरो फेसबुकको इन्बक्समा सुरेन्द्र फुँयालले
visit us at : www.samabad.com
तेस्रो दिन पनि आन्दोलन जारी
पोखरा महानगरले ३० सडक बालबालिकाको उद्धार ९ भाद्र २०६९, शनिबार १५:१९
गण्डकी प्रदेश सरकारले तोक्यो अत्यावश्यक सामग्री र मुल्य (कति सहित) ९ भाद्र २०६९, शनिबार १५:१९
पोखरा महानगरका चार वडामा विदेशबाट आएका ६७ जना घरमै क्वारेन्टाइनमा ९ भाद्र २०६९, शनिबार १५:१९
लक डाउन थप गर्न सिफारिस ९ भाद्र २०६९, शनिबार १५:१९
संघिय सरकारले अरु प्रदेशलाई कोरोना परीक्षण गर्ने मेसिन दिने, गण्डकीलाई दिएन ९ भाद्र २०६९, शनिबार १५:१९
कोरोना भाइरस संक्रमित युवतीसँग जहाजमा पोखरा आएका अरु यात्रु कहाँ छन् ? ९ भाद्र २०६९, शनिबार १५:१९
आइसोलेसनमा भर्ना भएका बिरामीको मृत्यु, स्वाब परीक्षण रिपोर्ट आउन बाँकी ९ भाद्र २०६९, शनिबार १५:१९
लकडाउन पालना गर्दै र गराउँदै युवा ९ भाद्र २०६९, शनिबार १५:१९
पोखरामा खाद्यान्न आपूर्तिलाई सहज बनाइने ९ भाद्र २०६९, शनिबार १५:१९
कोरोना रोकथाम कोषमा एकताको सहयोग ९ भाद्र २०६९, शनिबार १५:१९